पारिजात पुग्दा प्रेमी बाउ बनिसकेछ – Sourya Online
पारिजात पुग्दा प्रेमी बाउ बनिसकेछ
सौर्य अनलाइन २०७० जेठ ७ गते २:४५ मा प्रकाशित
हामीलाई लुगा सिलाउँदा बुबा दिदीको नाप लिनुहुन्थ्यो । भन्नुहुन्थ्यो, ‘सुकन्या, तैँले विष्णुको लुगा लगाए भइहाल्छ नि †’ दिदी मभन्दा अग्ली भएकाले मलाई ठीक हुँदैनथ्यो । तर पनि बुबा दिदीका पुराना लुगा लगाउन भन्नुहुन्थ्यो । सानोमा दिदी अन्तर्मुखी स्वभावकी थिइन्, कम बोल्ने । तर, स्वाभिमानी थिइन्, कसैका अघि नझुक्ने । अनावश्यक आलोचना मन नपराउने । कतिपय मान्छे उनलाई ‘घमन्डी’ पनि भन्थे । युवावस्थामा पुग्दा स्वभावमा परिवर्तन आयो । खुब रमाइलो गर्न मन पराउन थालिन् । केही न केही भनेर म र कान्छी बहिनीलाई हँसाइरहन्थिन् । हामी पेट मिचीमिची हाँस्थ्यौँ । झमझम पानी परेर उघ्रिएको साँझ उनलाई अति नै मन पथ्र्यो । जुनेली रात साह्रै रमाइलो मान्थिन् । अनौठो स्वभाव थियो । रात्रि पिकनिक जाउँm भन्थिन् । दिदीको आग्रहमा एकपटक हामी राति ६–७ जना मिलेर बालाजु पिकनिक गएका छौँ । रमाइलो भएको थियो । हरिया डाँडा उनका मन पर्ने ठाउँ । पकौडा, रोटी, कोइरालाको अचार खुब रुचाउँथिन् । कहिलेकाहीँ छेउमै बसेर सिकाउँथिन्– ‘सुकन्या, यो तरकारी यसरी काट्नुपर्छ । आज यस्तो खाना पकाऊ, यो–यो मसला हाल ।’ जन्मेदेखि अन्त्यसम्मै म दिदीको साथमा रहेँ ।
दिदी कोर्सका किताब खासै पढ्दैनथिन् । अन्य साहित्यिक किताब नै बढी पढिरहन्थिन् । उति बेला हामी आइए पढ्थ्यौँ । रिजल्ट भयो । बुबालाई दिदी पास हुने विश्वास थिएन । भन्नहुन्थ्यो– ‘पढेकी भए पो पास होस् ।’ एक जना दाजुलाई रिजल्ट बुझ्न पठाउनुभयो । दुवै पास भएको खबर आयो । विश्वास नलागेर बुबाले भन्नुभयो, ‘होइन होला, जा–जा तीनचोटि हेरेर आइज, यस्तो हुनै सक्दैन ।’
रोगले गाँजेसँगै दिदीमा निराशा बढ्दै गएको थियो । निराशावादी कुरा गर्न थालेकी थिइन् । भन्थिन्, ‘यो जिउ नदुखेको क्षण कस्तो होला ? सबैतिर कट्कटी खान्छ, कसरी बाँच्नु †’ बिस्तारै रक्सी खान थालिन् । रक्सीले दुखाइ कम गर्दो रहेछ भन्थिन् । सात चौथाइसम्म खान सक्ने बताउँथिन् । पछि दुई बहिनी सँगै बसेर खान थाल्यौँ । रक्सीको नशाले पीडा कम भएको महसुस गराउँदो रहेछ उनलाई ।
दिदीको साहित्यिक पाटो जति चर्चामा आयो, सामाजिक काम ओझेल परेजस्तो मलाई लाग्छ । ती पनि बाहिर आउनुपर्छ । कयौँपटक नेपालका जेलमा गएर बन्दीका केटाकेटी बाहिर ल्याउने काम गरिन् उनले । अरूकै सहारामा भए पनि विभिन्न ठाउँ जान्थिन् । ०४६ सालपछि ऋषिकेश साहको अध्यक्षतामा मानवअधिकार संगठन बन्यो । उपाध्यक्ष दिदी थिइन् । आस्थाका बन्दीहरूलाई भेट्न जेल गइरहन्थिन् । उनीहरूका अधिकारबारे आवाज उठाइन् । बन्दीका छोराछोरीबारे उनको फराकिलो सोच थियो । आफैँ हिँड्न सकेकी भए कति धेरै गर्दी हुन्, ती निमुखाहरूका लागि †
मेरा लागि मेरो जीवनको सर्वस्व नै पारिजात दिदी हुन् । आफूले बिहे नगर्ने भएपछि उनले मलाई बिहे गर्न भनिन् । उनैको प्रस्तावमा निर्मल लामासँग मेरो बिहे भयो । यति बेला दिदी मसँग छैनन् । उनको तस्बिरमुनि बसेर काम गर्छु । लाग्छ– दिदीको आत्माले मलाई मार्गदर्शन गराइरहेछ । आज मैले जे गर्न सकेकी छु, सबै दिदीको प्रेरणा र आदर्शले हो । आफ्नो बुताले त के गर्न सक्थेँ र ? आजका दिनमा पनि जति पारिजात दिदीलाई सम्झन्छु, त्यति त आफ्ना स्वर्गीय जीवनसाथी निर्मललाई पनि सम्झन्नँ । आज पनि म अधुरो छु, केही छैन मसँगजस्तो लाग्छ । दिदी भएकी भए सबै कुरा हुन्थे † जीवन पूर्ण हुन्थ्यो ।